Fomba 9 Azonao atao ny mampisondrotra ny rafitry ny tsimokaranao mandritra ny areti-mifindra - Rebates Fitness
Home » Blog » Fomba 9 Azonao atao ny mampisondrotra ny rafitry ny tsimokaranao mandritra ny areti-mifindra
Betsaka ny vaovao mipoaka nitangorona teo amin'ny COVID-19. Na izany aza, ny fahazoana fototra dia ny aretina amin'ny taovam-pisefoana dia mitarika ny fahafatesan'ny olona manana hery fanefitra malemy kokoa na amin'ireo manana olana ara-pahasalamana hafa.
Noho izany, tsy mahagaga raha olona an-tapitrisany no liana tamin'ny fahasalamany tampoka ary maniry ny hampitombo ny hery fiarovan'ny vatany. Raha manaraka ny fomba fanao ilaina ianao, ny vaovao tsara dia ny ahafahanao miaro ny fiarovan'ny vatanao ao anatin'ny fotoana fohy.
Ireto misy fomba 9 izay hampiseho aminao ny fomba hampitomboana ny hery fanefitra ataonao mandritra ny vanim-potoana marobe! Ireto torohevitra 9 manentana ny fiarovana an-tsokosoko ireto dia hanomezarana anao amin'ity vanin-taolana ity.
1. otrikaina C
Fantatsika rehetra fa io no otrikaina malaza indrindra hanohitra ny hatsiaka sy ny fisorohana ny gripa. Na izany aza, ny vatan'olombelona dia tsy manana ny fahafahana hitahiry vitamina C. Noho izany, mila maka vitaminina C fanampiny ianao isan'andro. Mety ho takelaka mony, gimazy, na karazany manondraka ao anaty rano toy ny emergen-C.
Mandritra ireo fotoana mampidi-doza ireo dia tsara kokoa ny maka ny fatra isan'andro amin'ny alàlan'ny famenony fa tsy manandrana mamaly ny zavatra ilainao isan'andro amin'ny alàlan'ny ranom-boasary na mikiakiaka amin'ny broccoli.
Mineraly tsy voahaja matetika, ny zinc dia manana tombony betsaka. Tsy afaka mamokatra izany ny vatanao. Mila mandany azy io amin'ny fomba mavitrika ianao.
Azonao atao ny mividy mora zinc avy amin'ny magazay ara-pahasalamana amin'ny Internet na ivelany. Dato isan-jato fotsiny no ilaina amin'ny fitazonana fahasalamana tsara indrindra.
Zinc dia hanampy amin'ny fanamafisana ny rafitra fiarovana amin'ny vatanao, mampihena ny fanaintainana, manafainganana ny fanasitranana ary mampihena ny risika ateraky ny aretina mifandraika amin'ny fahanterana. Tena ilaina tokoa izany ankehitriny satria ny olon-dehibe dia mora voan'ny COVID-19.
Manatsara ny fahasalaman'ny tavy anao ny Probiotika ary vokatr'izany, hihamatanjaka ny fanoheranao. Manampy amin'ny famokarana antibiôsy izy io ary mampihena ny olana ara-pahasalamana amin'ny fisefoana koa. Tena tianao ny mandany probiotika.
Ny Yogurt, miso, kombucha, kimchi ary tempeh dia probiotics tsara be dia be amin'ny sakafo hohaninao.
4. Famenarana menaka tongolo-kena
Ny tongolo gasy dia fanamafisana ny tsimatimanota, ary ny allicin tafiditra ao dia manana fananana ara-pahasalamana. Ny tongolo gasy dia iray amin'ireo sakafo mahomby indrindra amin'ny natiora ary miasa fahagagana amin'ny fisorohana aretina sy fanatsarana ny fahasalamana ankapobeny.
Afaka mahazo ny sasany avy amin'ny magazay ara-pahasalamana ianao ary mandray anaty kapsily na 2 isan'andro. Na dia tsara aza ny mihinana tongolo gasy, dia mora kokoa ary tsara kokoa ny famenon-tsakafo satria mila maka tongolo lay betsaka ianao hahazoana ny habetsaky ny allicin azonao amin'ny kapsily.
Manandrana manilika COVID-19 ianao fa tsy Dracula. Pil iray natelina mora azo no hatao.
Ny mitokana irery dia tsy midika hoe fahaterahana. Ny fanatanjahantena dia hampivoatra ny tsy fahampiana amin'ny alàlan'ny fandehanan-drà misy anao miakatra ary hanatsara ny herinao sy ny fiaretanao.
Na dia mijanona ao an-trano aza ianao, dia misy fampihetseham-batana an-trano an-taonina maro azonao atao mba hahazoanao manao fanazaran-tena isan'andro. Mandrosoa ary andramo ireo programa fampihetseham-batana toy ny P90X na Insanity Max. Ho gaga ianao amin'ny maha-sarotra ireo fanazaran-tena ireo. Ataovy amin'ny fiarovana sy fampiononana ny tranonao manokana ny asanao! Handoro kaloria ary zahao ny endorphins ireo amin'ny Beachbody amin'ny Demand!
Mariho fa ny fanatanjahan-tena tafahoatra dia mety hampihena ny fanimbananao. Noho izany, mazotoa miasa isan'andro fa aza ampiana tafahoatra. Miaraka manodidina ny coronavirus dia tsy mila rafitra fiarovana amin'ny vatana malemy ianao.
Raha mitady drafitra fampihetseham-batana mahafinaritra ho an'ny vehivavy ianao, dia manolo-kevitra ihany koa i Danette May's DVD Flat Belly Fast izay atolotray maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra ihany. Ny vola rehetra anananao dia sarany kely amin'ny fandefasana.
Aaron sy Paul drafitra fanazaran-tena safidy tsara koa. Ao anatin'ny 90 minitra isan-kerinandro fotsiny, ity drafitra fampihetseham-batana an-trano ity dia hanampy anao hanao fampihetseham-batana raha tsy misy gym izay midika hoe afaka mahazo endrika ianao, mampihena ny lanjanao ary mihamatanjaka mandritra ny Quarantine Coronavirus.
Mampiasà hatsembohana ary esory ny fonao, fa aza miasa isan'andro ho trotraka ary mandoa hetra tsy misy ilana azy ny rafi-pitaintainanao.
Makà torimaso 7 ka hatramin'ny 8 ora isan'andro. Ny vatana miadana tsara dia vatana mahasalama sy matanjaka kokoa.
Rehefa mandatsaka ny be lanja aminao be loatra ianao dia hihatsara ny fahasalamanao. Miaraka amin'ny tsy fahampian-tsakafo rehetra ao amin'ny fivarotana lehibe, izao dia fotoana lehibe toy ny misy ny fampiharana drafitra fifadian-kanina mampihena ny lanjany.
Manontany tena ianao hoe inona ny atao hoe fifadian-kanina miserana? Ny fifadian-kanina miserana matetika dia tsy mikasika ny haninao… fa ny fotoana hanina mandritra ny andro. Io dia mazàna mihinana izay mihodina eo anelanelan'ny vanim-potoana fifadian-kanina sy fihinanana. Tsy faritana mazava izay sakafo tokony hohaninao, fa tokony hihinana azy io. Amin'io lafiny io dia tsy sakafo amin'ny heviny mahazatra fa voafaritra kokoa amin'ny fomba fisakafoanana.
Lean Fast RFL dia fandaharana fifadian-kanina lehibe mandritra ny 12 herinandro izay azonao atomboka amin'ny fampiononana ny tranonao. Miaraka amin'ny torolàlana amin'ny antsipiriany, kalkulator, programa momba ny fiofanana sy ny maro hafa izay mampiseho anao ny tena tokony ataonao mba hahazoana very tavy, hihazona hozatra ary manangana vatana matihanina sy manao fanatanjahantena.
Ny hery fanefitra ataonao dia hampivoatra ary hihatsara be ny fahasalamanao raha manaraka ny drafi-pisakafoanana mety ianao ary manao ny lanjanao amin'ny lanjany. Raha mihinana salady ianao (izay manoro hevitra) ho ampahany amin'ny drafi-lanjanao mavesatra, manoro hevitra izahay handinika azy io salady sombin-tsakafo ambony amin'ny salady hampihenana lanja.
8. Ny fiankinan-doha
Aza miala amin'ny sigara. Manamaivana ny fisotroanao toaka. Tetezo ny fihinanana siramamy ary mikendry ny miala amina fahazarana tsy mahasalama anao.
Ho mafy izany… saingy antenaina izany. Tongasoa ny fahasarotana ary reseo izany. Vantany vao esorina ireo fahazaran-dratsy manimba ireo dia hahatsapa ianao ary ho toy ny marika vaovao.
9. Ny fahadiovana manokana
Ny fahadiovana ifotony toy ny fanasana tanana tsy tapaka, ny fikasihan-tànana rehefa any ivelany sy ny fandroana amin'ny fotoana ahatongavanao any an-trano dia zava-dehibe avokoa na dia izany aza ny fomba fanao mora izay hampisondrotra ny hery fiarovan'ny vatanao.
Rehefa tonga any ivelany avy any ivelany ianao dia AZA mipetraka eo ambony sezalaran-tory na fandriana. Tsy azonao ny mikraoba ao amin'ny fitafianao… ary tsy mila aparitaho amin'ny vokatra hafa ao an-tranonao izany. Atsofohy ao anaty milina fanasan-damba avy hatrany ny fitafianao, mandro, avy eo mitafy akanjo madio.
Amin'ny fanekena ireto toro-hevitra 9 ireto amin'ny fomba hanamafisana ny hery fiarovanao mandritra ny areti-mifindra, dia hanatsara ny fiarovana ny vatanao ianao ary hanome anao fotoana mety hiadiana amin'ny COVID-19 na aretina hafa manandrana hipetraka ao amin'ny vatanao.
March 25, 2020 Admin Blog Tsy asian-teny